Fanadinam-panjakana sy ny JMJ Mada : notsikerain’ny katolika ny minisiteran’ny Fanabeazana | NewsMada
Fanadinam-panjakana sy ny JMJ Mada : notsikerain’ny katolika ny minisiteran’ny Fanabeazana
Mitohy ny disasisa eo amin’ny fiangonana katolika (Ekar) sy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Tsy azoazon’ireo eveka ny daty samihafa navoakan’ny fanjakana tato ho ato manoloana ny laminasa efa napetraky ny fiangonana.
Tokony ho nifampidinihana na nakana hevitra ? Nambaran’ny arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona Odon, sy ny avy any Fianarantsoa, ny Mgr Rabemahalafy Fulgence fa mifanindry amin’ny “Andron’ny tanora” JMJ Mada andiany fahasivy, hatao any Mahajanga ny nampihemorana ny fanadinam-panjakana CEPE. Tahaka izany koa ny mety hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany raha hotanterahina ny faramparan’ny volana novambra, indrindra fa andro alahady satria fankalazana sy fanamarihana ny fetin’i Ikritsy Mpanjaka izany. Niaraka nanamarika ny fifampiarahabana ho an’ny oloben’i Fianarantsoa tao Antanana Ambony izy ireo, notronin’ireo tompon’andraikitra isan-tokony ary koa ny fiangonana hafa ny 26 janoary teo.
Ankoatra izany, tsy levon’ny vavonin’ireto eveka ireto ny fanilikilihana ny sahirana sy ny mahantra. Hita taratra izany tamin’n y fandalovan’ny filoham-pirenena sy ny lehiben’ny governemanta tany an-toerana ka nandravana ireo trano tsizarizary nipetrahan’ireo 4-mis teo amin’ny manodidina ny kianjan’Ampasambazaha sy ny faritra hafa.
Vahaolana maharitra fa tsy fanilikilihana
Mbola niverina indray koa izany tamin’izao lanonana tsotra tany an-toerana izao, tamin’ny fanalana azy ireo. “Aoka hotsinjovina ny maha olona sy ny fahasahiranan’izy ireo. Tokony hitadiavana vahaolana fa tsy hahilikilika tahaka izao”, hoy ny eveka.
Tsy vao izao ny ady mangatsiaka eo amin’ ny Ekar sy ny fanjakana. Teo, ohatra, ny tsy fankasitrahan’izy ireo ny ampahany amin’ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana (PSE). Ny nidiran’ny mpianatry ny Ekar mialoha ny daty nomen’ny fanjakana tamin’ireny andron’ny pesta ireny…